HOGAANKA CUSUB EE BUNTILAAN: “Hawl baa u Taal, Halna waa lagu eegi”C/raxmaan Sh.Cali. • Horseed Media
You are here: Home / Opinion / HOGAANKA CUSUB EE BUNTILAAN: “Hawl baa u Taal, Halna waa lagu eegi”C/raxmaan Sh.Cali.
HOGAANKA CUSUB EE BUNTILAAN: “Hawl baa u Taal, Halna waa lagu eegi”C/raxmaan Sh.Cali.
Intii ay socotay doorashadii Buntilaan waxaa talooyin wax tar leh loo soo jeediyey dad badan oo go’aan ku lahaa soo xulista xubnaha baarlaamka. Ugu horeysayntii waxaa aad loola hadlay odayaasha dhaqanka, waxaa xigtay talooyin loo soo jeediyey guddiga khilaafaadka oo u xil saarnaa kala saarida xubnaha baarlamaanka ee lagu muransanaa. Sidoo kale waxaa aad loola taliyey xubnihii baarlamaanka ee 31-kii Diseember 2018 loo dhaariyey xilkooda, si ay u doortaan shaqsi u qalma hogaanka umadda.
Maanta talada, waxaa loo soo jeedinayaa Madaxwenye Saciid C/laahi Dani oo maanta (8-da Janaayo 2019) la doortay, isla markaana loo dhaariyey madaxweynaha Buntilaan ee mudda shanta sanno ee soo aadan(2019-2023).
Soomaalidu waxay tiraahdaa:” Ha la tukado wadaado way isku raaceen”. Taas waxaan ula jeedaa, dhammaan musharaxiintii u tartamay xilka madaxweynaha waxay isku raaceen inay Bultilaan u baahan tahay horumar iyo is-bedel dhinacyo badan leh. Sidoo kale waxaa hoosta laga wada xariiqay inaysan Buntilaan gaarin yoolashii lagu asteeyey aasaaskeedii ee ay ugu horeysay taabo gelinta xisbiyo siyaasadeed si looga digo rogto siyaasada ku salansan hab-beeleedka.
Dhinacyada badan ayaa horumar iyo wax ka qabad looga bahan yahay, waxayse ku soo ururayaan sida la carrabaabay: dhaqalaha, nabadgelyada, adeega bulshada, hanaanka dawladnimo, xiriirka, garsoorka iyo mideynta shacabka. Haddaba si wax looga qabto baahida bulshada ee baahsan, waxaa lama huraan ah in laysku dheeli tirto baahida bulshada iyo cida loo magacaabi doono golaha wasiirada. Waa arrin aad u adag in si sahlan loo doorto wasiir ama wasiiro ka soo dhalaali kara hawsha loo idmaday, maadaama aysan ahayn shaqo loo tartamayo ee ay tahay mid xulusho keliya ku kooban.
Balan-qaadyadii la galay xilligii doorashooyinka ayaa saamayn taban(negative) ku yeelan karta dhisida maamul tayo wanaagsan leh. Arrintaas waxaa looga gudbi karaa in si qoto dheer looga baaran dego cida wax loo dhiibayo, iyadoon loo eegin heyb qabiil iyo hiil doorasho midna.
Saciid Cabdullahi shalay waxaa uu ahaa musharax ay ku hareeraysan yihiin dad kooban, laakiin maanta waa madaxweyne bulshada Buntilaan oo dhani ku hareereysan tahay, sidaas darteed waxaa loo bahan yahay in talada dhisida maamulku ay noqoto mid ka baxsan xayndaabkii oralaha doorashada, waayo taladu bulashada oo dhan ayay taabanaysaa. Qancinta qof ama labo waxay qoor gooyo ku noqon kartaa bulsho dhan, waa haddi cida la qancinayo aysan u qalmin waxa lagu qanciyey.
Maamulka cusub waxa ugu horeeya ee lagu qiimeynayo waa golaha wasiirada oo ah muraayada dawlada. Sidoo kale waa meesha laga odorasayo waxqabadka maamulka, sida horey loo yiri: “ Soorta aan ka dhergi doono saansaanteedaan ka gartaa” ama “ Alif wixii ku qaloocday, Al-Baqra kuma toosaan”. Haddaba waa arrin mudan in aad looga fiirsado dhisida maamulka oo ay noqota mid ku salaysan, hufnaan, karti, aqoon, iyo waayo aragnimo. Waxqabadka iyo hufnaanta waa arrinta lagu qiimeyn karo cida wax loo dhiibayo. Aqoontu waa lagama maarmaan, haddana waa inay ahaa mid la sharibay/jaribay oo cida aqoonta leh la og yahay sida wax u qaban karta. Sababtoo ah cid kasta oo waxbaratay waxa ma qaban karo, cid aan wax aqoona, waxa ma qaban karto.
Maanta madaxweynuhu waxa u haystaa fursad uu kaga badbaadi karo dhammaan waxyaabihii uu shalay ku dhaliilayey maamulkii ka horey, waxna kaga qaban karo haabida bushlada, waase fursad aan surmaseegto u baahnayn. Ogow, madaxweyne, shalay waxaad arkeysay dhaliilaha maamulka, maantase waxaa la arkayaa dhaliishaada. Ogow, shalay waxay eedu kugu raacaysay wixii aad qofahaan u garab martay, maantase waxay eedu kugu raacaysaa wixii maamulkaagu uu dhinac maro. Ogow, shalay waxaad lahay haybada iyo hufnaanta shaqsiydaada, maantase waxaad yeelan haybada iyo hufnaanta maamulkaaga.
Ugu dambeyntii, dib-u-habaynta maamulku waa arrin u bahan talo badan, maskax badan, iyo xog-ogaalnimo, sidaas darteed, waa lama huraan sahan dhab ah oo baahsan lagu sameeyaa dhinacayo badan sida: dhaqaalaha, nabadgeliyada, hanaanka maamulka, gar-soorka, xiriirka dibada iyo gudahaba, adeega bulshada. Sahankani waxaa uu keeni karaa waxyabo badan oo aan hadda muqan ama mudgi ku jiro, si loo gaaro xal waara oo hurumar laga dhaxlo.
Hawsha u taal hogaanka cusub waa inuu daboolo dhammaan dulduleedyadii u muuqday xilligii doorashada, mida lagu eegi doonana waa dhisida golaha wasiirada oo dabooli kara hawshaas.